Ukuhlala esihlokweni kubhulogi yakho? Sebenzisa ifu lakho lethegi ukubona | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septhemba 2, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho ngivakashela amanye amasayithi, angivamile ukubheka ifu labo lamathegi. Angiqiniseki ukuthi kungani, ngicabanga ukuthi ngivame ukuba lapho ngoba ngazithola ngilapho ngesethenjwa noma isihloko noma amazwibela ayengithakazelisa.
Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ama-blogger anake ifu le-tag yabo. Ungabona ifu lami lamathegi kubha eseceleni ngaphansi kwe- "Amathegi". Ngicabanga ukuthi ngenza umsebenzi omuhle kakhulu wokugcina okuqukethwe, ngoba izinkomba zami zamafu ibhizinisi, marketing, Futhi ubuchwepheshe. Yilokho impela ebengikufuna ukugcina okuqukethwe yibhulogi yami ngakho ngicabanga ukuthi ngenza umsebenzi omuhle kakhulu.
Ifu lamathegi (ngokwesiko laziwa njengohlu olunesisindo emkhakheni wedizayini ebonakalayo) yisibonisi esibonakalayo samathegi wokuqukethwe asetshenziswa kuwebhusayithi. Imvamisa, amathegi asetshenziswa kaningi akhonjiswa kufonti enkudlwana noma egcizelelwa ngenye indlela, ngenkathi i-oda elibonisiwe ngokuvamile li-alfabhethi. Ngakho-ke bobabili ukuthola umaki ngama-alfabhethi nangokuthandwa kungenzeka. Ukukhetha umaki owodwa ngaphakathi kwefu lomaki kuzoholela eqoqweni lezinto ezihlotshaniswa nalelo thegi. - Wikipedia
Naka ifu lakho lamathegi, lizokunikeza imininingwane ukuze ubone ukuthi uhlala kokuqukethwe noma cha. Bheka amanye ala mafu wethegi bese ubona ukuthi lawa masayithi ahlala kokuqukethwe noma cha:
Ngaphandle kwezami, lezi ezinye zezibonelo zamabhulogi aphumelele kakhulu. Uma uqhathanisa ifu lethegi nencazelo yebhulogi, uzothola ukulinganisa okuhle phakathi kwabo. Ngicabanga ukuthi uma ifu lakho lethegi linganikeli isivakashi umuzwa wokuthi ibhulogi yakho imayelana nani, khona-ke kufanele ulungise ukugxila kwakho, noma ulungise indlela oyichaza futhi uyichaze ngayo ibhulogi yakho.
Sep 2, 2006 ngo-10: 41 PM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu - kubuka ifu lami lamathegi, konke kugcwele indawo 😆
Unesiza esihle lapha Douglas, qhubeka njalo!
Nov 14, 2006 ngo-1: 32 AM
Ngithele ngandlela thile kusayithi lakho kusuka ku-thrus thrus futhi ngithi nje le ndatshana ibisize kakhulu. Njenge-blogger entsha, kunzima ukuhambisana nayo yonke imibono ye-SEO laphaya. Siyabonga ngokukuvumela kube yifomethi ehlekayo. Manje uma ngingavele ngithole ukuthi ukushiya amazwana nge-URL yami yewebhu kuyafana nokubuyela emuva?
Jan 26, 2007 ngo-1: 22 PM
Ngingeze ifu lomaka kule sayithi.
May 28, 2007 ku-10: 03 PM
Imininingwane ewusizo kakhulu. Kepha ingabe i-Tag Cloud ingasebenzela isiza se-arcade?